मनै रु’वाउने घ’ट’ना : तिहारको मुखमा ३ छोराहरुको मृ:त्यु, सो:कमा डु’ब्यो परिवार ! – AB Sansar
November 12, 2020 adminLeaveaComment on मनै रु’वाउने घ’ट’ना : तिहारको मुखमा ३ छोराहरुको मृ:त्यु, सो:कमा डु’ब्यो परिवार !
तिहारको मुखमा ३ घरका एक्ला छोराहरुको मृ:त्यु, सो:कमा डु’ब्यो परिवार
२ दिन अघि तुलसीपुर दाङमा ट्रकले ठ;क्क’र दिँदा तीन जनाको मृ:त्यु भएको थियो । राप्ती गाउँपालिका वडा नं ४ मौरीघाटमा पश्चिमबाट पूर्वतर्फ जाँदै गरेको ना ६ ख ३३४४ नम्बरको ट्रकले विपरीत दिशाबाट आइरहेको रा ५ प ६७४४ नम्बरको मोटरसाइकललाई ठ:क्क:र दिँदा मोटरसाइकलमा सवार तीन जनाको घ:ट’ना’स्थलमै मृु:त्यु भएको हो । ***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला *****
पूर्ववाट पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ४ मौरीघाटमा बेलुका पौने ८ बजेतिर ट्रकले मोटरसाइकललाई ठ:क्क’र दिएपछि ट्रक पनि सडकमै प:ल्टिएको छ। तीव्र गतिका कारण उक्त दु:र्घ:ट:ना भएको प्रहरीले अनुमान गरेको छ। मृतक तीनै जना युवाको श:व पोष्टमार्टमका लागि लमही अस्पतालमा राखिएको छ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला *****